China 24kV 200A Bushing Faka ifektri abakhiqizi | Anhuang
U-Anhuang onguchwepheshe Ukufakwa kwe-Bushing, sinikezela ngokufakwa kwekhwalithi ephezulu ye-Bushing. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-IEEE386, ne-IEC.
Imicu yokufaka i-24kV 200A Bushing emthonjeni we-bushing jikelele ukuhlinzeka ngomsebenzi ofanayo njenge-break load load bushing. Ukusebenzisa ukufakwa kwe-bushing kwenza ukufakwa kwensimu nokufaka okunye kwenzeke futhi kusebenze kahle. Ukufakwa kwe-Bushing nezixhumi zendololwane kuqukethe izinto ezibalulekile zazo zonke izixhumanisi zekhefu. I-bushing Insert isebenzisa indlela yamanje enelungelo lobunikazi, equkethe iphoyinti elilodwa lamanje lokudlulisa, ngaphakathi kokufakiwe uqobo. Uhlobo oluyinkimbinkimbi lomklamo wendlela yamanje luletha ukusebenza okuphezulu, okuthembekile.
I-broach yangaphakathi ivumela ukufakwa okuhle okulawulwa nge-torque. Usebenzisa ithuluzi lokufaka i-torque lokuzikhethela, okufakwayo kwe-bushing kungaqiniswa kahle ku-bushing ngaphandle kokwesaba ukwephula ngephutha isikebhe se-bushing kahle. Indandatho yesibonisi se-latch ekhethekile, etholakala embuthanweni wesiphika wekhasi le-bushing, iqeda ukuqagela kokufakwa kwendololwana yokufakwa kwendololwane kokufakwa kwebhasi.
Iringi eliphuzi elikhanyayo linikeza impendulo esheshayo yokunquma ukuthi ngabe indololwane ifakwe kahle kulokho okufakwa.
Amalunga we-Single-pass casing amaloli abunjwe kusetshenziswa ukwahlukanisa okuphezulu okuphulukisiwe kwesulfure kanye ne-semi-conduction EPDM iraba. Lapho ihlanganiswe nento ekalwe ngokulinganayo, okufakwayo kwe-bushing kunikezela ngoxhumano oluvikelwe ngokuphelele nolucwilisiwe lokusebenza kokuphuka komthwalo.
I-1.INSULATION: Ikhwalithi ephezulu, i-perDM-ephulukisiwe ye-EPDM yerabha eyenziwe, ixutshwe futhi yabunjwa ngaphakathi ukuze isebenze ngokungaguquguquki futhi ethembekile yokusebenza kwensimu.
I-2.LATCH INDICATOR RING: Indandatho ephuzi ebunjiwe eqeda ukuqeda ukufakwa kwendololwane ngokuqinisekisa ukuxhumana kwekhwalithi.
I-3.SEMI-CONDUCTIVE SHIELD: Ikhwalithi ephezulu ye-EPDM yerabha inikeza isivikelo sangaphambili esivikelekile esifile esiqinisekisa ukuthi sinesisekelo.
I-4.CONTACT HOLDER: Ingxenye yethusi idlulisa okwamanje kusuka ku-piston-contact kuya ku-bushing well stud.
5.I-BREREEDED BASE: 3/8 ”-16 Imicu yethusi ye-UNC inikezela ukuxhumana ku-bushing well stud.
I-6.HEX BROACH: 5/16 ”i-hex broach ivumela ukufakwa okungaguquguquki nethuluzi le-torque.
ISO LE-GROUNDING: Amathebhu amathathu abunjwe waba isihlangu semi-conductive sokunamathiselwa kocingo lomhlabathi ukugcina ukuphepha kwangaphambilini kufile.
I-8.ARC SNUFFER ASSEMBLY: I-arc-ablative plastic ikhiqiza i-arc yokucima igesi ngesikhathi sokusebenza kokushintsha ikhefu.
I-9.SEMI-CONDUCTIVE SHIELD INSERT: Ikhwalithi ephezulu ye-EPDM yerabha inikeza amandla wokukhanda nokuvikelwa okufanayo kukagesi.
200A 24kV Bushing Faka I-AH DTT-24/200 24kV 200A
Langaphambilini 15kV 200A Rotatable Feedthru Faka
Olandelayo: 15kV 200A Bushing Faka
15kV 200A enwetshiwe Loadbreak Bushing ...